आई मेकअप कारखाना, आपूर्तिकर्ता - चीन आँखा मेकअप निर्माताहरू
निजी लेबल मेकअप आईशैडो color 35 रंगीन वाटरप्रूफ मैट पृथ्वी टोन पर्लसेन्ट सेक्वेन्ड ग्लिटर आइशाडो प्यालेट
आइटम कुनै J0877 ब्रान्ड Jinfuya वा आफ्नो ब्रान्ड बनावट पाउडर शैली, different 35 विभिन्न र colors्ग, म्याट रंग, shimmer रंग, आदि छ, यो ठीक र आरामदायक छ, मेकअप गर्न को लागी उपयुक्त shad shad शेड को लागी सबै छाला टोन मिलाउन सक्छ। यो ठीक छ। र आरामदायक, मेकअप गर्न सजिलो। प्रत्येक दिन वा रात बाहिर प्रयोगको लागि उत्तम म्याटहरू र चम्किला आईश्याडो प्यालेट। नेट सामग्री 305g / pallet समारोह महिलाको आँखा ब्यूटी मेकअप। हामी शाकाहारी र १००% क्रुति-नि: शुल्क नि: शुल्क OEMको बारेमा वचन दिन्छौं ...
कस्टम लोगो लाँग टिकाऊ लिक्विड ग्लिटर आईशाडो १ 14 कलर्स वाटरप्रूफ हाई पिग्मेन्ट शाइनिंग मेटलिक लिक्विड आईशाडो
यो के हो ? तरल आईशैडो एक उच्च प्रभाव, उच्च स्पार्कल तरल छाया हो जसले तपाईंलाई सुपर संतृप्त बोल्ड रंग र बहु-आयामिक प्रभाव दिन्छ। आँखा छाया पाउडर भन्दा बढी प्राकृतिक, छालाको साथ स्वाभाविक रूपमा सम्पर्क गर्नुहोस्, निर्दोष आँखा मेकअप प्रभाव। यस अपारदर्शी तरल आईशैडोको साथ एक-स्वाइप ग्लिटर कभरेजको साथ एउटा विस्तारित आँखा हेर्नुहोस्, आरामदायक पोशाकको लागि तयार गरिएको, न्यूनतम झर्ने र उच्च प्रभाव; र औंलाहरू वा फ्ल्याट आईस्याडो ब्रश प्रयोग गर्नुहोस् र एक सूक्ष्म, नरम लुकको लागि यसको आफ्नै लागु गर्नुहोस्, वा laye ...
शिमेर लिक्विड आईशाडो वेगन मेकअप आँखा प्रसाधन सामग्री १ colors रंग निजी लेबल चिनो तरल चमक चम्किला आँखा छाया
यो के हो ? आँखा छाया र color्ग र चमक पूर्ण, गहिरो ठोस, सजिलो dizb dizzy क्याच, एकसमान र,, सुख्खा भिजा उभ्याउने। राम्रो बनावटमा छनौट गर्न विभिन्न र colorsहरू छन्। ग्लिटर तरल आई आँखा छाया एक्लो लगाउन वा अन्य शेडहरूको साथ मिश्रण गर्न उत्तम छ, जसले प्रभावकारी रूपमा आँखा समोच्चलाई हाइलाइट गर्दछ र हरेक अवसरमा तपाईंलाई आँखा पछाडि बनाउँछ। अत्यधिक निश्चित महसुस गरिएको टिपको साथ, यो निरन्तर र सहज रूपमा बग्दछ, चाँडै सुख्खा हुन्छ, एक नाजुक र आकर्षक Eyeliner र आँखा sh सिर्जना ...